Renovables Verdes ndeye webhusaiti yeActualidad Blog nyanzvi mune simba rinowedzerwazve uye nharaunda. Isu tinonyatsobata yega yega epasirose-ane hushamwari simba uye tichiaenzanisa iwo akajairika. Isu tiri yakasarudzika svikiro iyo inopa chokwadi uye chakaomarara ruzivo.
Dare rekunyora reRovable Verdes rinoumbwa neboka re nyanzvi mune inowedzerwazve, yakachena uye girini simba, pakati pavo vakapedza kudzidza mune zvakatipoteredza sainzi. Kana iwe zvakare uchida kuve chikamu chechikwata, unogona titumire iyi fomu kuti uve mupepeti.
Vakapedza kudzidza muEnharaunda Sayenzi uye Master muEnharaunda Dzidzo kubva kuYunivhesiti yeMalaga. Nyika yesimba rinowedzerwazve iri kukura uye iri kuwedzera kushanda mumisika yemagetsi pasirese. Ndakaverenga mazana emajenali esainzi pamusoro pesimba rinowedzerwazve uye nedhigirii rangu ndaive nezvidzidzo zvakati wandei pakushanda kwavo. Uye zvakare, ini ndakadzidziswa zvakanyanya mukudzokorora uye nharaunda nyaya, saka pano iwe unogona kuwana yakanakisa ruzivo nezvayo.
Kuda nezve tekinoroji nesainzi inowanikwa kune zvakasikwa uye zvakatipoteredza. Technician mukudzivirira njodzi yebasa mukambani uye tekinoroji mukutarisira kwezvakatipoteredza.
Computer injinjini anodisa nezve hupfumi hwepasirese, kunyanya misika yemari uye simba rinowedzerwazve.
Kuzvipira kunharaunda uye sei chakakosha chikonzero chekuenderana nezvose zvinoitika kutenderera pasirese nepasi. Nechinangwa chekupa mwenje wakati wandei pane izvo zvinotikomberedza.